ekhaya > Travel Europe > 5 Best Iindawo Ukuze Yitya Ice Cream EYurophu
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 18/09/2020)
ERoma likhaya elinye ice cream, nesendlu best eYurophu, njengoko Ubisi. Nomzi uzele abathandi ice cream. imiboniso entle sizwana gelato kuyafana. kunjalo, kwisixeko kunye iivenkile gelato ezingabalekiyo, omnye limi gem efihliweyo that any gelato lover needs to visit. Abakhenkethi abaninzi balapha mhlambi Yizani Il Latte. Yintoni ukwenza ice cream yazo ekhethekileyo ukuze usenokubuza? Okokuqala, Abantu abaninzi onwabele izinongo abazizityebi emnandi abanikela. Zilungisa gelato zabo zemihla ngemihla zisebenzise izithako zemvelo. ice cream ze abo bazizityebi kwaye bukhrim, njengokuba negama libonisa. Ukuba uyazibuza oko Yiza Il Latte iindlela, uya kukuvuyela ukwazi oko kuthetha ukuba “like Ubisi”. Nditsho nabantu abathiye ubisi banokuzonwabela iincasa zabo ezingenalo ubisi. I-buciko emangalisayo. Okwesibini, abantu ndimnqule umoya evenkileni. Lufaka ngumongo nokuva kwazo eRoma.
Fantastic ice cream ayikho into abahlobo abaninzi Germany. kunjalo, Ballabeni Ucwambu lomkhenkce apha ukutshintsha ukuba ephuma yalo emangalisayo. Esi siqwenga somkhenkce siseMunich kwaye sinokulandelayo. Lokuphumula kukuye Giorgio Ballabeni, a nguGrandmaster kwimizobo yokwenza ice cream. Waqala ice cream njengomdlalo, kwaye yonke Munich unombulelo kuba. Abakhenkethi abaninzi balapha umthande isitora, usishiye ukubuyekeza emangalisayo. Xa uzama ice cream lwabo, akukho nzima ukubona isizathu sokuba. Baye aziwa ubugcisa babo bafezeke kwaye enye intle yentsimi lwabo. uthando lwabo luza kuzo zonke scoop. I bonus olongezelelweyo kukuba ilori lwabo ice cream kwaye kube amaqela zabucala!
Ukuba ukhe uzive ikomkhulu Hungary, qiniseka ukuba ahambele Gelarto Rosa. Le ivenkile ice cream okumangalisayo kukuba le intliziyo Budapest. Bonke malunga yesithethe, ubuhlobo, romance, nangothando, olubonakalayo emsebenzini wabo. Ngamanye amazwi, ukuba iingcali okwenyaniso endle. Njengokuba kude njengokuba ice cream lwabo, uya kuba uzakonwaba ukuva ukuba basebenzise kuphela izithako zintle organic. Zonke ivenkile ezinkulu ice cream uyakuphepha ngumntu ice cream. kunjalo, yintoni eyenza Gelarto Rosa Ayikho indlela yabo awenze ekubumbeni ice cream ibe rose. Ukuba ngaba ngonaphakade Szent uIstván Square ngexesha ngemini eshushu, Uya kuqiniseka ukubona abantu abaninzi abanezithambiso ezimile okomkhenkce ezihamba-hamba.
Ukulungele ukuba ezithandwa nencasa ukuba iYurophu ukuba anikele? Incwadi Yakho Ukuqeqesha Tickets ngoku. Emveni kwalonto, you can experience the delicious world of ice cream in Europe.
#cooldown #icecream #traveleurope eurotrip Ukutyazana